ဓမ္မရသ: အမေ မွေးဖွားပေးခဲ့သောနေ့
ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 18.11.09
ALONG MY LIFE´S JOURNEY I HAVE MET A FEW VERY SPECIAL PEOPLE WHO HAVE INSPIRED ME TO SEARCH FOR MY OWN PATHS PUSH MY OWN LIMITS AND DISCOVER THE WAYS I NEED TO GO,
MAY YOU LOOK BACK WITH CONTENTMENT AND AHEAD WITH EXCITEMENT TO A NEW AND WONDERFUL YEAR,
AND ALSO THANK YOU VERY MUCH FOR YOU NEW POST THAT MAKES TO MISS ALL OF OUR MOTHERS.
...HAPPY BIRTHDAY MGLAY...
မွေးနေ့မှာ အမေ့ကျေးဇူးကို မမေ့မလျော့ ပို့စ်လေးနဲ့ ဂါရ၀ ပြုထားတာ အမေ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အမအနေနဲ့လဲ အင်မတန်မှ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မောင်လေးက သားသားနဲ့လဲ မွေးနေ့တူနေတော့ ပိုပြီး အမှတ်တရ ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ မွေးနေ့မှစပြီး အရာရာတိုင်း ပြီးပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။
မွေးနေ့မှာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ..။
မွေးနေ့မှာ မိဘနှစ်ပါးကို ဓမ္မနဲ့ သတိတရ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အစ်ကို့ရဲ့ သိတတ်မှုကို သာဓုခေါ်ပါတယ်...။ အစ်ကို့ရဲ့ (၂၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် သေမယ့်အချိန်ထိ တရားနဲ့ ပျော်မွေ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်အစ်ကို..။ အစ်ကိုပြောတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ.. ကိုယ်လွှတ်လိုက်တဲ့ စွန်လေး အမြင့်မှာပြန်တက်နေတာကို ကြည့်ပြီး ကြည့်နူးပီတိဖြစ်နေသလိုပါပဲ.. အစ်ကိုရဲ့ စွန်လေးအမြင့်မှာ ပျံတက်နေတာကို အစ်ကိုနဲ့အတူ အစ်ကို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးပါ ထပ်တူပီတိတွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းပေးပါတယ်..။ အစ်ကိုတစ်ယောက် မိမိသူတစ်ပါးအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ရင်း ရည်မှန်းရာ ပန်းတိုင်ကို ဆိုက်ရောက်နိုင်ပါစေ..။ ဆုတောင်းပေးပေမယ့်.. ပန်းတိုင်ကိုလျောက်လှမ်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ပန်းတိုင်ကို မုချရောက်မှာပါအစ်ကို..။ တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူကို တရားကပြန်လည်စောင့်ရှောက်မှာပါ။ အစ်ကိုတစ်ယောက် တရားကပြန်လည်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း...။
ငွေရတုမွေးနေ့မှတိုင် ရွှေရတုမွေးနေ့ စိန်ရတုမွေးနေ့များ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး သာသနာ အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ
မောင်လေး အောင်ဦးရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်... သာသနာအကျိုးကိုလည်း ဆထက်တိုးပြီး ရွင်ဆောင်နိုင်ပါစေ...။
မိဘကျေးဇူးကို အထူးမြတ်ဆုံးသော ကျေးဇူးဆပ်နည်းဖြစ်တဲ့ တရားနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပါစေ ကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါတယ် အစ်ကို... မွေးဖွားခြင်း တဖန်မဖြစ်လိုတော့တဲ့ အစ်ကိုတယောက် ငြိမ်းအေးရာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို အမြန်ဆုံးရအောင် ကြိုးစားနိုင်ပါစေ...
မွေးနေ့မှာပျော်ရွင်ပါစေ ကိုအောင်ဦး . .
သာသနာအကျိုးကို ဒီ့ထက်မကဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး မိဘကျေးဇူးကို တရားထူးတရားမြတ်ဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်နိုင်သော သားကောင်းရတနာဖြစ်ပါစေရှင်. . .
စွန့်လွှတ်ပြီးချစ်တတ်တဲ့အမေ့ဖြစ်လို့ အမေဟာ ဒါနနဲ့တူတယ်။ စောင့်ရှောက်ပြီးချစ်တတ်တဲ့အမေ ဖြစ်လို့ အမေဟာ သီလနဲ့တူတယ်။ သားသမီးတို့ အကျိုးစီးပွားတိုးပွားဖို့ ချစ်တတ်လို့ အမေဟာ ဘာဝနာနဲ့တူတယ်။ အမေ့ကိုချစ်သလို ဒါနကိုချစ်ပါ။ အမေ့ကိုချစ်သလို သီလကိုချစ်ပါ။ အမေ့ကိုချစ်သလို ဘာဝနာကို ချစ်ပါ။
အမေမွေးပေးတဲ့ ဒီခန္ဓာ မြေရဲ့ခွန်အား မြေသြဇာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ လူတို့ခွန်အား လူ့သြဇာဖြစ်ရမယ်။ မြေသြဇာက သစ်ပင်တွေကို ရှင်သန်စေနိုင်သလို လူ့သြဇာက လူသားတွေကို ရှင်သန်စေနိုင်ရမယ်။
၂၅ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အမှတ်တရ စကားလက်ဆောင် ....... (သုခ)
မွေးနေ့မွေးရက်မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားလေးနဲ့ အသိတရားလေးတွေ ဖတ်ခွင့်သိခွင့် ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... အမေတွေတိုင်းကို ပြောပြသလို လူတိုင်းကိုလဲ အသိတိုးစေပါတယ်။
မွေးနေ့မှစ၍ ပျော်ရွှင်စရာ စိတ်ချမ်းသာ စရာများနဲ့သာ ကြုံကြိုက်ပြီး မိဘကျေးဇူး ဆပ်နိုင်သော သားကောင်းလိမ္မာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ။
အများကိုလည်း တရားပြ၍ ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုးထွင်းသိမြင် နိဗ္ဗာန်သို့တိုင် တက်လှမ်းနိုင်ပါစေ...
ဘာသာ၊သာသနာ အကျိုး ဆထပိုးတိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ လို့.....မွေးနေ့မှာ အထူးဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဦးဦးရေ... မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ! :)
သူငယ်ချင်းရဲ့ ခံစားချက် စေတနာနဲ့ အရေးအသားကို ခံစားမိပါတယ်.... မွေးနေ့ဆိုတာကတော့ သတ်မှတ်ချက် အချိန်ကာလတစ်ခုပါပဲ.... အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်အေးချမ်းပြီး ချမ်းသာရာအစစ်ကို အမြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ...
မွေးနေ့မှာ အလွန်ကောင်းမွန်ထူးမြတ်တဲ့ ပိုစ့်ကလေးနဲ့
မိဘကို မမေ့မလျော့ ကျေးဇူးပြုတာ ဘယ်လိုပြောပြရမှန်း မသိအောင် ကြည်နူးဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ။
တရားနဲ့ ပျော်မွေ့တတ်အောင် .. တရားနဲ့နေတတ်အောင် အစ်မကို လမ်းပြသွန်သင်ပေးခဲ့တာ ဒီနေရာလေးနဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း မိတ်ဆွေမြတ် မောင်လေးပါပဲ ။
အစ်မလဲ ဒီ comment လေး ရေးရင်းနဲ့ ကျေးဇူးရှင် မိဘ နှစ်ပါးကို အဝေးတနေရာကနေ ရိုသေစွာ ရှိခိုးကန်တော့ရင်း မောင်လေး မွေးနေ့ကို ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။
Happy Birthday ပါ ကိုအောင်ဦး
ကိုအောင်ဦးရဲ့ မွေးနေ့ပိုစ့်လေးက အမေအားလုံးကို ရည်ညွှန်းထားသလို ပါပဲ။ ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားမိတယ်။ မိဘကျေးဇူးကို အမွန်မြတ်ဆုံးသော ဓမ္မနဲ့ ဆပ်နိုင်ပါစေဗျာ။
SiSi Cho Than said...
You have many friends who wishing for your birthday. I've sent you already my birthday wish. Please check your e-mail. Remember, you become closer one more year to ma-ra-na station. But also try to work hard for your life achievement without hurting anyone physically and emotionally.
မှိုလေးသည် မြေကြီးမှ ထွက်လာသည့်အခါ မြေမှုံလေးကို ရွက်ထွက်လာသလို ဘ၀မှာ ဇာတိကို ရလာကတည်းက အိုဒုက္ခ၊ နာဒုက္ခ၊ သေဒုက္ခကြီးကို ထမ်းပြီးထွက်လာတယ်။ မွေးဒုက္ခကို ရလာလို့ မွေးနေ့ဆိုတာ ပေါ်လာရတယ်။ မွေးနေ့တိုင်း၏ နေ့ရက်များသည် သေခြင်းတရား၏ ပုံရိပ်၊ ဇာတိဒုက္ခ၏ပံရိပ်များချည်းသာဖြစ်သည်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ လေးဖြစ်ပါစေ။ စွန့် လွှတ်ခြင်းနဲ့ စွန် လွှတ်ခြင်းကို မိဘကျေးဇူးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရေးသားထားတာ ကိုကျေနပ်မိပါတယ်။ မိဘကျေးဇူးကိုဖော်ညွှန်းထားတဲ့ အတွက် အထူးသဖြင့် မိခင်များအတွက်ပိုစ့်ကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ သာဓုခေါ်ဆိုမိပါတယ် အောင်ဦး ရေ..။ မွေးနေ့ မှနောင်အသက်ရှင်သန်နေသမျှကာလ ပတ်လုံး မောင်လေးအောင်ဦးရဲ့ ဆန္ဒလေးများလည်းပြည့်
စုံပါစေ။ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာတော်အတွက်လည်း အကျိုးပြုနိုင်ပါစေ။